BAREFOOT...!!!: कथा: समयक्रम २
सोचाइमा बग्दा बग्दै घर पुगेको पत्तै पाएन उस्ले । छोरो तलै सडकमा ह्स्याङ फस्याङ गरेर एउटा भुस्याहा कुकुरको पछी दगुर्दै थियो । उस्ले "मुला" भन्दै छोरोलाई उठायो, र कोठामा लाग्यो ।
"होमवर्क गरिस? कस्तो फोहोरी त हँ यो?" भित्र भान्छाबाट आमाको जवाफ आयो : "के गर्थ्यो? मलाई त टेर्दै टेर्दैन । धुर्मुसेको डाइलग बोलेर उल्टै हप्काउछ नकराउ भनेर ।"
"त्यस्तो गरेको हो तैले? हिजो के पढिस देखा त ? यत्रो सात-सात बर्षको लाठे भएर ।" छोरालाई हप्काउन खोज्यो, के हप्काउनु ? आफु घरमा भइन्न, हजुरआमालाई यल्ले टेर्दैन ।
छोराले बाहिरी पाना उध्रेको कापी ल्याएर उस्लाई देखायो । "ओहो टेबल पढेर आको ?" छोराले मुन्टो हल्लाएर "अँ" भन्यो ।
"ल भन् त थ्री एट जा कती ?" छोराले औंला भाँचेर 1 देखी 8 सम्म हिसाब गरेर भन्यो 24 । "स्याबास! अब फोर सिक्स जा कती त ?" छोराले फेरी 1 सेखी6सम्म औंला भाँचेर भन्यो 24 । "बाफ रे, जान्ने भैछस् त । 8 मा 1 जोडे कती त ?" छोराले औंला भाँचेर जवाफ दियो "1"।
"हरे टेबल कन्ठ गरेछ तर जोड्न बिर्सेंछ यल्ले ।" कलर बक्सको कलर पेन्सिल आठ वटा ठड्याएर देखायो, "ल भन, यो कतिवटा?" छोराले 12गर्दै गनेर भन्यो "8" । उस्ले आफ्नो हातको एउटा औंला ठड्यायो, यो कतिवटा ? छोराले उत्तर दियो "1" । अब यो सबै गरेर जम्मा कतिवटा ? छोराको फेरी उत्तर आयो "1" । "थुइक्क, class 2मा पुग्ने बेला भाको मान्छेको ताल।" भनेर पिट्न खोजेको थियो, उस्का हात रोकिए । त्यसै नि ममी खोइ भनेर उधुम गर्छ, पिट्यो भने झन आपत ।
"जा किचेनमा गएर आमालाई रेडी पार्न भन ।" भनेर बरान्डामा निस्क्यो । चुरोट सल्कायो र फेरी बिगतमा हरायो ।
उनिलाई भेट्न एक महिना कुर्न कती गाह्रो भयो भनेर कसरी व्याख्या गरोस उस्ले, यस् बिचमा उस्का चर्का भाषण र बहस उल्लेख्य घटेका थिए, जाँगर मरेर टोलाउने भएको थ्यो उ । अरुले त पत्तो पाए पाएनन्, शिबेले पक्कै पत्ता पायो होला, छट्टु पो छ त यो । उस्ले त्यो एक महिना सोचेरै बितायो, कहिले भबिष्यको बारेमा, कहिले भेटेर के भन्ने भन्ने बारेमा । सधैं दिमाग खराब !
भेट्न जाने दिन बिरामी भएर हेल्थ पोस्ट जानुपर्ने बहाना बनाएर बिदा माग्यो कमान्डरसँग, कमान्डरले छोडे पो । बल्ल बल्ल कती कोशीष पछी शिबेलाई साथी लिएर जानु भन्ने आदेस भो । "हरेशिव हत्ते! यल्ले म भन्दा पहिला यहाँ हल्ला फिजाउँछ ।" अब नमानी भएन । बाटोमा बिरामीको जस्तो नाटक पनि गर्नै पर्‍यो । शिबे बकेको बकेकै छ चे गुएभाराको बारेमा, उस्को चाँही हावा फुस्केको छ ।
बाटोमा थकाई मार्ने ठाउँमा पुगेपछी उस्ले दिशा लागेको बहाना बनायो, अर्थोक भन्यो भने शिबे सँगै आउँछ, अनी उस्लाई यही बस्दै गर भनेर उ झाडीबाट तल ओर्लेर बत्तियो । अनी एक सासमा कुदेर अस्तिनको चौतारामा उभियो ।
उनी आएर बसिसकेकी रहिछन, उ ट्वाँ पर्‍यो "अब के भन्नु?" उस्लाई वाल्ल परेर उभिएको देखेर उन्ले नै "बस्नुस् न!" भनिन । ५ मिनेट पछी रुन्छे स्वरमा उस्को मुखबाट बोली निस्क्यो "सन्चै?"
दिनभरिको भेटपछी फर्किदा उस्को खुशीको सीमा थिएन, उनिहरुले सबै योजना बनाउन भ्याए, जनबादी बिहेदेखी परिवारसम्मको । उन्लाई बिदा गरेर माथि डाँडामा निस्केसी उस्लाई दुइटा कुरा याद आयो, एउटा बिहानदेखी केही खाको छैन, अर्को शिबेले मार्छ । अचानक उस्लाई पछुतो लाग्यो, थुइक्क, प्रेम प्रस्ताब त मैले पो राख्नुपर्ने । जीबन यस्तै हो, नपरुन्जेल मान्छे उफ्रिन्छ, चिच्याउछ, ठुला कुरा गर्छ, परेपछी थाहा हुन्छ ओठतालु कसरी सुक्छन, दिमागले कसरी काम गर्न छोड्छ र आफुले अरुलाई थेचार्ने उपदेशले कसरी काम गर्न छोड्छन । :)
त्यस्को एकमहिनापछी गुपचुप तरीकाले पार्टीभित्रै जनबादी विवाह गरे, केही साथीहरुको उपस्थितीमा । बिहा जस्तो मात्रै । पहिलो भेट र बिहाको बिचमा दुई पटक जती मात्रै भेट भाको हो उनिहरुको । बिहा भएपछी एक हप्ताजती सङ्गै बस्ने छुट पाएका थे उनीहरुले, त्यस्पछी पार्टीको जिम्मेवारि लिएर उ धादिङ हानियो,उनी त्यतै रहिन । एक बर्षजतीपछी मात्र उस्को भेट उनिसँग भयो, त्यतिखेर अहिलेको छोरो जन्मिसकेको थियो ।
उनिहरुको खास बैबाहिक जीबन पार्टी शहर पसेपछी शुरु भयो किनकी बल्ल त उनिहरुले सङ्गै बस्न पाए । पार्टिको आदेश बमोजिम उस्ले चुनावका लागि उपत्यका आउनु परेकोले उनी र छोरा पनि सँगै शहर पसे । चुनाव सकिएपछी उस्ले युनियनका प्रभाबले क्यासिनोमा बाउन्सरको जागिर पायो, उनी चाँही एउटा फाइभ स्टार होटेलमा ।
शहर पसेपछी उनिहरुको सम्बन्ध पनि शहरीया भो । उ पहिले नपिउने मान्छे "सोसियल ड्रिन्किङ" को नाममा पिएर आउन थाल्यो, उनी "सोसाइटी"मा फिट हुने नाममा पार्लर र पार्टी धाउन थालिन । कहाँ जङ्गल को त्यो धुलोमैलो गोल्डस्टार पार्टी, कहाँ शहरको यो "शीलाकी जवानी" पार्टी । तुलना पनि कसरी हुनु र ?
बिस्तारै उनिहरुको भेट पातलियो । बिहान उ नउठ्दै उनी ड्युटी गैसक्ने, साँझ उनी आउने बेला उ ड्युटी जानुपर्ने, अनी उ फर्केर आउँदा उनी सुतिसक्ने । अझ थप गहिराइ तब आयो जब बल्ल बल्ल बिदा भएका दिनमा पनि उनका हातमा फेसबुक, च्याट र ल्याप्टप झुन्डिन थाले । शहर साह्रै निर्दयी छ, यस्ले मान्छेलाई आध्यात्मिक रुपमा कङ्गाल बनाउछ । मान्छेहरु खुशीको खोजिमा यहाँ ओइरिन्छिन, अनी दु:खै दु:खले यसरी थिचिन्छन कि कुनै दिन झुक्केर सुख आए पनि थाहा नपाई जान्छ । पहिले भेट हुँदा लुकामारी चल्ने आँखाहरुमा अब एक अर्काप्रती शंका र इर्ष्या थियो ।
अघिल्लो महिनाबाट ट्रेनिङको बहानामा उनी १५-२० दिन घरै आइनन, फोनमा कुरा हुँदा "बिजी छु, पछी गर्छु" भन्ने उत्तर आउथ्यो । बिस्तारै फोन उठ्नै छोड्यो । यता छोरोले ममी खोजेर हैरान र उता छोराकी ममिले फोन नउठाएर हैरानको बिचमा म डिभोर्स चाहन्छु भन्ने ब्यहोराको SMS पो आयो । होइन, दुनियाँ के सारो भर्च्युअल भाको हौ, डिभोर्स नोटिस समेत SMS बाट आउन थालेका छन आजकाल ।
चुरोटको तेश्रो खिल्लीको धुवाँ निरुदेश्य उडाउदै उ सोच्दैछ, सम्बन्धहरु किन यती फितलो हुन्छन । SMS बाट आएको डिभोर्स नोटिसको के जवाफ दिनु उस्ले ? छोराको ममी कहिले आउछिन भन्ने प्रश्नको के उत्तर दिनु ? उस्ले उनीलाई सक्दो माया गरेको थ्यो, कहिलेकाहीको ठाकठाक ठुकठुक बाहेक खासै बहस भएका पनि होइनन । हिजो उनिसँग हिंड्ने को थियो ? उस्को पार्टी र उ दुबैलाइ शहर लागेको छ आजकाल । उस्को पार्टी सिद्दान्त, निती, उदेश्य छोडेर शहरको धुवाँमा भासिएको छ, उ आफ्नो जिन्दगी चुरोटको धुवाँमा निरुत्तर उडाउदै छ । कहिलेकाही उत्तरहरु किन यती गाह्रा र असजिला हुन्छन जिन्दगीका ?
सोच्दैछ, SMS को उत्तर के फर्काउनु ? :(
Labels: Blog, Leisure, love, Maoist Conflict, Nepal, Nepali Story
Location:Kathmandu, Nepal Kathmandu 44600, Nepal
Friendycalls February 8, 2012 at 2:58 PM
कुरो गरि साध्धे नै भएन | नाम चलेका कथाकारहरु बर्षमा एउटा लेख्छन र पनि केहि सिमित मात्रै चर्चाको शिखरमा पुग्छन | तर यहाँको त कुरै बेग्लै भयो | दैनिक जस्तो कथा रचिन्छन, एकपछी अर्को उस्तै राम्रो, अत्यन्तै यथार्थपरक र समयसामयिक | उत्कृष्ठ रचनाहरुको लागि धेरै धेरै धन्यबाद | लेखन जारि रहोस, चाडै नै उत्क्रिष्ठ कथाकारमा नाम कहलिन्छ |
jaw knock raazaa February 8, 2012 at 4:01 PM
Thanksalot bro! :)) Overwhelmed!
nepaliblog February 8, 2012 at 3:48 PM
कुरो गरि साध्धे नै भएन...
jaw knock raazaa February 8, 2012 at 4:02 PM
सबिन एकतारे February 8, 2012 at 6:52 PM
सकाउन हतार गरेजस्तो लाग्यो । जसरी यी दुइको प्रेमको शुरूवात विस्तारै भएको थियो, सम्बन्धको फाटो पनि विस्तारपूर्वक भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अझै एक भाग थप्दा हुन्थ्यो । तर पनि राम्रै छ, मजाको छ । :)